BLOG : अब त साउँ–ब्याज बुझाउनुहुन्छ कि प्रचण्डजी ! - Ratopati
- | मञ्जु क्षेत्री
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पत्र
मुलुकको ३९औँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएछ । मुलुकले अभिभावक पाएकोमा मनमा हर्ष र उमंग हुनुपर्ने तर त्यसो भएन । म पूरै तटस्थ छु । कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्जस्तो । सामाजिक सञ्जालमा बधाइ र शुभकामनाको ओइरो लागेको थियो तर म भने आफ्नो ‘वाल’मा बधाइ र शुभकामना व्यक्त गरेर दुर्गन्धित बनाउन सकिनँ ।
जब तपाईं प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएको थाहा पाएँ, विगत सम्झेँ । जुन बेला जनताको घरदैलोलाई गाँस, बास र कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने माध्यम बनाउनुभएको थियो । प्रत्यक्ष रुपमा तपाईंले नै नभए पनि तपाईंका कार्यकर्ताले बनाएका थिए । तपाईंलाई होला । मलाई लाग्छ– तपाईंले आफ्ना अभिभावकको भन्दा बढी ऋण सर्वसाधारण जनताको खानुभएको छ । अब उक्त ऋण तिर्ने बेला यही हो । बेलैमा सचेत हुनुहोस् । सावाँ र ब्याजसहित चुक्ता गरिदिनुस् ।
जब म तपाईंका कार्यकर्ताको भाषण सुन्थेँ, लाग्थ्यो– शान्ति पुनःस्थापनापश्चात् मेरो देश पूर्ण रुपमा बदलिनेछ । बदल्न त बदलियो नै तर सोचेभन्दा विपरीत दिशामा बदलियो । जनताका लागि गर्दै छौँ, यो लडाइँ भनेर कति मीठा आश्वासन दिन्थे तपाईंका कार्यकर्ता । तर, आज लाग्छ– त्यो त केवल आफ्नो पेट भर्ने आधार पो बनाएका रहेछन् । शान्ति पुनःस्थापनापश्चात् त तपाईंका कार्यकर्ता खै कता लोप भए सम्पर्कविहीन भए । सायद उनीहरु स्वयम् खाडीमा भेडा चराइरहेका होलान् । मुलुकको नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई धिक्कारिरहेका होलान् ।
मलाई माफ गर्नुहोला । म फेरि विगत सम्झन बाध्य भएँ । तपाईंको जनयुद्धले निरन्तरता पाएकै थियो । मर्ने मरेकै थिए । मार्नेले मारेकै थिए । कोही सहिद घोषणा भएनन् । सायद सहिद घोषणा भएको भए पक्कै पनि आज मेरो देश हजारौं सहिदको देश भनेर चिनिन्थ्यो होला । म पनि त्यही समयमा बुवासँग सदरमुकाम जाने मौका पाएँ । कुरा २०५७ तिरको हो । जुन बेला म सात कक्षामा अध्यनरत थिएँ । प्रथमपटक सदरमुकाम जान पाएकोमा आश्चर्य त थिएँ नै, त्यसमाथि जब चेकिङ पोस्ट आयो, हामी चेकिङका लागि लाइन लाग्यौँ ।
पुलिसले बुवाको परिचयपत्र हेर्नसाथ भन्यो, ‘माओवादी पाल्ने यिनै शिक्षक हुन् । यिनलाई कोच्नुपर्छ ।’ सायद यसको अर्थ हिरासतमा कोच्नुहोला । यति भन्दा पनि बुवा नाजवाफ हुनुभयो । र, आफ्नो बाटो लाग्नुभयो । मैले सोचेँ– बुवा घरको बाघ र वनको स्याल हुनुहुँदोरहेछ । घरमा जोसुकै डराउँछन् बुवासँग । तर, त्यो पुलिसले त्यति भन्दासम्म पनि किन चुप लाग्नुभयो ? सन्दर्भ प्राणरक्षाको रहेछ । बोल्या भए त कति समयका लागि हिरासतमा बस्नुपथ्र्याे । दर्दनाक अनुभव संग्रह गर्नुपथ्र्याे ।
प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंले ताकेको कुर्सीको युद्ध अथवा जनयुद्ध र सशस्त्र विद्रोहक्रममा घटेका घटनालाई उल्टाउन चाहन्न । पुनः एकपटक तपाईंले आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने मौका पाउनुभएको छ । कृपया यसलाई नचुकाउनुहोला । कुर्सीमुखी होइन, जनतामुखी हुनुहोला । जनतालाई विकास र निकासतर्फ मार्गदर्शन गराउनुहोला अनि मात्र मैले भन्ने छु– मुलुकको महान् प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डलाई हार्दिक बधाइ ।
उही तपाईंको गणतन्त्र नेपालकी शुभचिन्तक